#Fabregas oo ka hadlay Conte: Wuxuu i tusay muhiimada tababarka | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Fabregas oo ka hadlay Conte: Wuxuu i tusay muhiimada tababarka
#Fabregas oo ka hadlay Conte: Wuxuu i tusay muhiimada tababarka
Xidiga khadka dhexe uga dheela Chelsea ee Cesc Fabregas ayaa wuxuu yahay mid hada soo kordya, kadib markii uu si daciif ah uu ku bilowday xagaagan oo uu ka hoos shaqeynayo Conte, isagoona qirey inuu umarey rafaad badan.
Wuxuu sheegay laacibkaan in tababar badan oo uu ku sameeyay xarunta kooxdiisa ay ka saacidey inuu kamid noqdo safka koowaad iyo falsamada macalinkaan Talyaaniga kasoo jeeda.
Febregas ayaa wuxuu xaqiijiyey inay ku adkeed inuu la qabsado falsafada Conte, islamarkaana uu ahaa mid aanan ku habooneen inuu kamid noqdo, laakiin halgan badan oo uu sameeyay uu ku guuleystay.
Wuxuu hadalkiisa ku bilaabey Febregas: “Waa run in intii lagu guda jirey qeybta koowaad ee xili ciyaareedkan aanan ku wacneen in la iigu rakibo falsamada Conte ama aan kamid noqdo.
Wuxuu hadalkiisa ku darey: “Si fiican ayaan ula qabsadey kadib markii aan ushaqeeyey si adag, oo aan farsamo ahaan iyo jir ahaan aad aan isku diyaariyey wax walbana aan ku bixiyey.
Febregas ayaa hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay: “Waxa uu yahay mid muhiimada badan iigu siiyey tababarka, waxaana aan ahaa mid marar badan ku dheelay, waana wada dheelney, waxaana utababaraney si wada jir ah.